Amabhulukwe / amaShort → Izingubo zokukhangisa • Imishini efekethisiwe yekhompyutha yeP & M
Amabhulukwe / amaShorts - amamodeli wesizini ngayinye
Amabhulukwe / izikhindi zokuphromotha kufanele zikhange ngokubonakalayo futhi zisebenze kahle. Izembatho ezikhululekile ukusebenzisa ziyisici esibalulekile esinquma ukukhetha komkhiqizo onikeziwe. Amamodeli amabhulukwe nezikhindi esinazo esitolo zenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme ezivumela isikhumba ukuba siphefumule futhi sivumelane nomsebenzisi.
Amabhulukwe aqinile futhi amelana nomonakalo. Kulabo abafuna ukugqama emncintiswaneni noma ngezifiso amabhulukwe sincoma ukubulawa imihlobiso. Ukuphrinta kwenziwa kunoma yiziphi izindawo eziqokiwe, ngokuya ngokuthandwa yikhasimende.
Ibhulukwe le-Adler elinethuba lokungena kwanoma iyiphi i-logo, imifekethiso
Izinga eliphakeme kakhulu lokunemba
Esitolo sethu ungathenga amabhulukwe abesilisa, abesifazane noma izingane, kanye nezikhindi zabesilisa nezabantwana ngosayizi abaningi. Izikhindi zithandwa kakhulu entwasahlobo nasehlobo, lapho amaqembu amaningi namaqembu enza imisebenzi yawo yangaphandle. Ngokulandelayo, ekwindla, lapho kuqala unyaka wesikole, kuqala inkathi yokuthenga izikhindi zezingane. Zingabhalwa futhi nge-logo ngayinye yesikole noma yeklabhu.
Sinikeza ukumaka ngakunye ngokunyathelisa kwesikrini noma imifekethiso yekhompyutha. Senza imihlobiso ngokunakekela okukhulu kakhulu, okungenzeka sibonga ngemishini yanamuhla. Ngenxa yokuqapha ukufekethiswa kuzo zonke izigaba, izingubo zibukeka zisebenza futhi zisebenza kahle. Ukuphrinta okungapheli kuyamelana nomthelela ongemuhle wezici. Amabhulukwe nezikhindi kugcina imibala yomkhiqizi kanye nesimo sangempela. Izembatho zingagezwa njalo, ngokuya ngezincomo ezikulebula - ngokuzilandela, singaqiniseka ukunciphisa ingozi yokulimala.
Izikhindi zamadoda / zezingane ze-Adler, kungenzeka kwanoma iyiphi i-logo, ukumaka
Kukholakala ukuthi ukubulawa izingubo zokukhangisa kuyabiza. Noma kunjalo, lokhu akulona iqiniso. Ngenxa yokuthengiswa kwenqwaba yezingubo, sikwazile ukuthola izindleko zokukhiqiza eziphansi. Ngokubambisana nezinkampani eziningi nezikhungo, kanye nokuhlangenwe nakho okubanzi, siyakwazi ukunikeza ukubambisana okuthembekile nezintengo zokuncintisana.
Ngaphezu kwalokho, amakhasimende enza ubuhlobo baphakade nathi ukubambisana, inganikezwa imibandela engayodwana, futhi lokhu kuzoholela ekongeni isabelomali. Ukwenza ngezifiso amabhulukwe nezikhindi kunenani ngalinye, kuya ngobunzima behluzo nendlela yokumaka.
amabhulukwe e-bershkaIbhulukwe elimhlopheamabhulukwe amakhulu enkanyeziibhulukwe le-bonprix ephrintiweamabhulukwe ezitshaloamabhulukwe we-hmamabhulukwe e-mohitoamabhulukwe orsayamabhulukwe agodliweamabhulukwe esonoibhulukweamabhulukwe e-adidasIbhulukwe labesifazane be-adidasIbhulukwe lamadoda adidasamabhulukwe militiasamabhulukwe ezithwala abesifazaneamabhulukwe ezimithwalo abesilisaamabhulukwe ezimithwaloamabhulukwe omamaamabhulukwe kagwayispodnie damskieibhulukwe labesifazane ngokuphrintaAma-Sweatpantsadigas joggerizithukuthuku zabesifazaneizithukuthuku zabesifazane eziphrintiweizithukuthuku zamadodaizithukuthuku zamadoda eziphrintiweizithukuthuku ze-nikeamaswidi ngephrintaizithukuthuku zamadoda eziphrintiweamaswidi ngokubhala phansisweatpants ngephrinta emhlaneamaswidi ngokubhala kwakhoIbhulukwe ibhulukwe lokuphrintai-jeanama-denim jean ngemivimbo eshicilelwe ngesikhumba senyoka kusuka kuqoqo le-1975ibhulukwe labesilisaamabhulukwe amadoda ngephrintacamo amabhulukweamabhulukwe e-camo yabesifazaneski amabhulukweamabhulukwe okushushuluza abesifazaneski ibhulukwe izingane lidlski ibhulukwe lezinganeski ibhulukweAmabhulukwe kaNikeama-dungareesama-dungaree okusebenza aneprintaibhulukwe lomsebenzi oprintiweumsebenzi webhulukwe ngokuziphrinta kwakhoamabhulukwe e-snowboardamabhulukwe okuhambaamabhulukwe okuhamba abesifazaneamabhulukwe aluhlazaibhulukwe elihlohliwe labesilisaamabhulukwe acijileibhulukwe eliwumbimbiamabhulukwe anezimboboibhulukwe ngeketangaibhulukwe elinokuphrintaibhulukwe elinemibhalo yabesifazaneibhulukwe elinombhalo wezimbaliamabhulukwe anokuphrinta kwabesilisaamabhulukwe anokuphrinta ngezansiibhulukwe elinombhalo wezimbaliIbhulukwe eliphrintiwe laseZaraibhulukwe nokuphrinta kwakhoibhulukwe elinqe eliphezuluamabhulukwe we-stradivariusibhulukwe le-tchibo, ubude obungu-7/8 nokuphrintiweibhulukwe eliwumbimbizara amabhulukwe